कोरोना हानीभन्दा आतंक धेरै
यो आलेख शुरु गर्दा २० अप्रेल २०२०मा ग्रिनविच मिन टाइमको चौविस घण्टे घडीमा १ बजेर ३० मिनेट गएको छ । यो वेलामा विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या वल्र्डोमिटरले २४ लाख ६ हजार ९ सय ५ देखाएको छ । त्यही कुल विश्व जनसंख्या ७ अर्ब ८० करोड देखाएको छ । यो समयमा कुल मृत्यु १ लाख ६५ हजार ५८ छ । कोरोना जितेर अर्थात निको भएर जाने ६ लाख १७ हजार १३ छन । यो संख्या कोरोना ताण्डवको १ सय ११ दिनको हो । प्रतिदिन कोरोना हराएर ५ हजार ५ सय ६० जना फर्कदैछन भने १ हजार ४ सय ८८ कोरोना संग हारेका छन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको हरेक पल्ट फरक फरक कुराले विश्वमा आतंक पैmलाउन मद्दत गरेको छ । यसले कोरोनालाई काल्पनिक जुम्वी बनाउने भाइरसको रुपमा चित्रण ग¥यो । यसले मानवता माथी प्रहार ग¥यो । धेरै हल्ला यस्तो चल्यो कि कोरोना लागेपछि लगेको विमारी दैव संयोगले बाँच्यो भने फर्काइन्छ नत्र त्यसको अन्तिम संस्कार गरेर खबर मात्र परिवारलाई दिइन्छ । यो हल्लाले मरेपनि परिवार मै रहौ र परिवारले पनि अन्तमा आङ्खनो प्रियजन आपैmसंग रहुन भन्ने ठाने । त्यसैले उपचार भन्दा लुकेर मृत्यु वरण गर्न मानसिक रुपमा तैयार हुनुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो हल्ला कतिसम्म खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा प्रम ओलीले राससमा दिएको हालैको अन्तरवार्तामा छर्लङ्ग भएको छ ।
उनी भन्छन विदेशमा कोरोनाको कारणले मरेकाहरुको लास माथी लास गाडिन्छ, के तपाइहरु यहाँ पनि त्यस्तै होस भन्ने चहानुहुन्छ ? उनलाई यो प्रश्न गर्न कसैले सक्दैन के कोरोना भन्दा पहिला मान्छे मरेकै थिएनन र ? किनभने नेपालीहरु काल्पनिक मृत्युको डरले काँतर भएका छन । काँतर मात्र हैन स्वार्थी पाि भएका छन । यो पाप मोचनको निमित्त ‘राहत’ नाम केही कुरा बाँडेर त्यसको प्रचार गर्न तल्लिन छन । हैन भने सरकारले गरेको काम छोडेर बस भनेको सबैलाई काम दिएको हो । त्यो काम बापत जीवनधान्ने ज्याला पाउनु सबैको अधिकार हो । सक्नेले त्यो ज्याला छोडेनु भनेको सरकारलाई गरेको मद्दत हो जसरी अरुले तलवको केही भाग छोड्छन त्यस्तै हो ।
अर्को हल्ला आउँछ विज्ञान असफल भयो विज्ञानले घुँडा टेक्यो । अव विज्ञानले कसरी घुँडा टेक्यो ? रोग पहिचान गर्ने पद्धती त्यसै आयो त ? हरेक महामारीको खोप, दवाई तैयार गर्ने एक प्रकृया हुन्छ । ज्यादा जसो अवस्थामा तीन महिना महामारी झेलेर निको भएका व्यक्तिमा त्यो महमारी संग लड्ने एन्टिवडी विकसित हुन्छ । त्यही एन्टिवडीबाट दवाई विकसित गरिन्छ । यो कुरामा असहमति राख्नेहरुले पुराना महामारीको मेडिकल इतिहास पढे हुन्छ । विज्ञान भनेको चमत्कार हैन जो अचानक र कुनै आधार वेगर नै केही कुरा आविष्कार गरोस् । हरेक आविष्कारले लामो प्रकृया पुरा गरेका छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित कम भेटिएका छन् किनभने लकडाउन गरेर गर्नु पर्ने रोगीको वृहत खोजी शुरु नै गरेको छैन । शंका लागेमा मात्र परिक्षण हुन्छ । सरकारले ‘अरिंगल’हरुको कारणले विश्वास गुमाएको छ । सरकारका हरेक कदमले तिव्र आलोचना खप्नु परेको छ । किनभने अहिलेसम्म प्रति १० लाख जनसंख्यामा १ हजार १५ जनाको मात्र परिक्षण गरेको छ । त्यही पनि संसारमा कसैले गर्न नसकेको काम गरे भैm आफ्नो पिठ्युमा धाप मार्न अरिंगल खटाएको छ । स्वास्थकर्मीहरुले सम्हल्नुपर्ने मोर्चामा सर्वदलिय उच्चस्तरिय संयन्त्रको चर्चा चलाउँछ । यो विश्वासको संकट यस्तो छ कि सरकार हरेक कदम फिर्ता लिनु पर्ने दयनिय अवस्थामा पुगेको छ ।
जनमानसमा सरकार विरुद्ध जनताको मनस्थिति बन्दैछ । प्रमको पहिलो पल्टको भनाई स्वतन्त्रता कि जीवन आलोचित भयो, हालैको अन्तरवार्तामा भोक कि जीवन भन्ने अर्थलाग्ने रोजाई दिएका छन । यसको उत्तर कुनै दिन जनताले दिन परेमा के होला ? किनभने उत्तर २ हजार ४ सय ६२ ज्यान गुमाएको ब्राजिल र ४० हजार ५ सय ५५ ज्यान गुमाएको संयुक्त राज्य अमेरिकाका जनताले दिन शुरु गरिसके ।
कोरोना भाइरस महामारी हो, समय समयमा यस्ता महामारी आउँछन् । तर मानव इतिहासले यस्ता भाइरस परास्त गरेका छन्, अव पनि गर्छन् ।